Stress – Page7– Healthy Life Journal
စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရချိန် ဘာတွေကို ရှောင်သင့်သလဲ . . .
စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ အစာကို နည်းနည်း လောက်စားလိုက်ရုံနဲ့ ပိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ စိတ်ကျဝေဒနာ လက္ခဏာ ပိုမဆိုးလာအောင် သတိပြုဆင်ခြင်သင့်တဲ့ အစာတွေ ရှိပါတယ်။ (၁) အဆင်သင့်အစာ (Fast Food) အဆင်သင့်အစာ စားလေ့ရှိသူတွေဟာစားလေ့ မရှိသူ aတွထက် စိတ်ကျရောဂါဝေဒနာလက္ခဏာ...
ယုံကြည်ထိုက်သူကို ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ . . .
စိတ်ညစ်နေရင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများနေရင် သင်ယုံကြည်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို သင့်အကြောင်း ပြောပြ လိုက်ပါ။ အဲဒီလို ရင်ဖွင့်ပြောပြရင်း မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေချာသုံးသပ်နိုင် သွားမှာပါ။ တကယ်လို့ တခြားသူတွေကို ကိုယ့်အကြောင်းပြောပြဖို့ သက်သောင့်သက်သာ မရှိဘူးဆိုရင် စာထဲမှာ ချရေးလိုက်ပါ...
သင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကလေးငယ် ပူပင်သောက များနေကြောင်း ပြသသည့် သတိပေးလက္ခဏာ ခြောက်ရပ်
မီမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူ ၁၀ ဦးမှာ တစ်ဦးက ပူပင်သောက များနေပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ပူပင်သောကများတဲ့ အခါ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေကျ အပြုအမူတွေမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်တာကို လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေချိန် စတဲ ့စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့...
စိတ်ဖိစီးမှုကို အနိုင်တိုက်နေကြသော ခွန်အားကြီးမား မိန်းမသားများ
၊ သဒ္ဒါထက် ၊ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာရင် သင်ဘယ်လို အနိုင်တိုက်လေ့ရှိပါသလဲ၊ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အနိုင်တိုက်တာ အလုပ်ဖြစ်ပါရဲ့လား။ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်လာတဲ့အခါ အနိုင်တိုက်နေကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အမျိုးသမီးတချို့ရဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အတုယူနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ – အင်ဂျလီနာဂျိုလီ စိတ်ဖိစီးမှုဖြေရှင်းတဲ့ နံပါတ်တစ်အချက်က မိသားစု၊...
၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)၊ သခွားသီးသုပ် စားတာကြောင့် အောက်ပါကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ – ဦးနှောက်ကို အကာအကွယ် ပေးပါတယ်။ – ကင်ဆာအန္တရာယ်ကို လျော့ကျ စေပါတယ်။ – ရောင်ရမ်းမှုကို တွန်းလှန် ပေးနိုင်ပါတယ်။ – အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ဂုဏ်သတ္တိ ရှိပါတယ်။...
ရယ်မောခြင်း၏ အနာကျက်စေသည့် အစွမ်း
တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးပြီးချိန်မှာ သင်တကယ် စိတ်ပါလက်ပါ ရယ်မောဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတာကို ဆန်းစစ် ကြည့်လိုက်ပါ။ အားရပါးရ မရယ်ရ သေးရင် ရယ်လိုက်ပါ . . စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာလာပါလိမ့်မယ်။ – ရယ်တာကြောင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်က ထုတ်ပေးတဲ့ အန်ဒိုဖင်ဟော်မုန်းတွေ အထွက်တိုးလာပြီး စိတ်...
ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် စိတ်ပူပြီး စိုးရိမ်စိတ် များနေတယ် . .
မေး. အခုတလော ရွေးကောက်ပွဲလည်း ရှိတော့ စိတ်ပူနေပါတယ်။ အရွယ်ရောက် သားတွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် စိုးရိမ်စိတ်က အလိုလို ဝင်နေပါတယ်။ ရင်တုန်တာကလည်း ခဏခဏဖြစ်လို့ သက်သာအောင် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဒေါ်ခင်မေ၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးမှဖြေကြားသည်...
ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာပေါ့ရှင် . . .
ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဉာဏ်ဝင်းကျော် ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည် တစ်နေ့ ဆေးရုံက ပြင်ပလူနာကြည့်ဌာနမှာ အသက် ၅၀ အရွယ်အပျိုကြီး ဒေါ်မြသီတာဟာ အာပေါင် အာရင်းသန်သန်နဲ့ စကားတွေပြောနေပါတော့တယ်။ “ နိုင်ငံကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမှာ ကျွန်မပဲ၊ အခု ဘယ်လောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေနေ...
အရေပြားပေါ်က အဖြူ စက်များအတွက် သဘာဝကုထုံး
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)၊ မယ်လာနင် ဆိုတာ အရေပြားကို အညိုရောင် ဖြစ်စေတဲ့ ရောင်ခြယ် ပစ္စည်း တစ်မျိုးပါ။ အသားညိုတဲ့ သူတွေက အသားဖြူတဲ့ သူတွေထက် မယ်လာနင် ဓာတ် ပိုမို ထွက်ရှိ ပါတယ်။ မယ်လာနင် ပမာဏ...
ဆီးချို ရောဂါရှိသူ အမျိုးသားများ ဆီးချို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မကောင်းလျှင် ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မား
ဆီးချို သမားအမျိုးသား ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်က ပန်းသေပန်း ညှို းရောဂါ Erection Dysfunction) ရတတ်ကြောင်း လေ့လာမှုအရ သိရသည်ဟု ဆီးချို နှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကိုက ဆိုသည်။တချို့က တက်စတိုစတီရုန်းဟော် မုန်းနည်းလို့ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ (ED)...